चलचित्र “मिस नेपाल” बैशाख ५ देखि अल नेपाल रिलिज ओभर ल्यापिङ्ग नगरिदिनु हुन निमात्री तथा नायिका शुभेच्छाको अनुरोध – Namaste Filmy
हाम्रो समाजमा एउटा महिला सफल हुन के कस्ता पापड बेल्नु पर्दछ र वास्तवमा सफलताको लागि के गर्नु पर्दछ भन्ने विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्न खोजिएको चलचित्र “मिस नेपाल” बैशाख ५ गते अल नेपाल रिलिजको तयारी पुरा भएको निमात्री तथा नायिका शुभेच्छा थापाले बताउनु भएको छ । चलचित्रका सह–नायिका क्षितिजा शाक्य हुन भने अन्य कलाकारहरुमा कल्याण घिमिरे, सुरज सिजापती, सोनु केसी, सविन श्रेष्ठ, बिमला गीरी, रश्मी भट्ट, पंकज जोशी लगायतका अभिनय रहेको चलचित्रको निर्देशन सुरेन्द्र तुलाधरले गर्नु भएको छ । प्रमुख क्यामेरा पर्सन दिब्य सुवेदी रहेका छन् भने नृत्य निर्देशन साइमन राजवंशीको रहेको छ । संगित अर्जन पोख्ररेल र विकास चौधरीको रहेको छ भने शब्द शंकर अधिकारीको रहेको छ । रिलिजिङ्गको सन्र्दभमा निर्मात्री तथा नायिका थापासंगको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रश्न ः चलचित्र मिस नेपाल अल नेपाल रिलिजिङ्को डेट सरयो नी ?
उत्तर ः मिस नेपाल बैशाख ५ गते देखि अल नेपाल रिलिजिङको डेट् फिक्स्ड गरेको छु । फागुण १६ गतेको तयारीमा थिए । तर संभव भएन ।
प्रश्न ः नेपाली चलचित्रहरु प्रर्दशनको क्रममा यस्ता झिना मसिना समस्याहरु किन आइपरिरहन्छ ?
उत्तर ः यो प्राय निर्माता–निर्देशकहरुले भोग्दै आइरहेका समस्या हुन । यसमा विविध कारणहरु छन् । जसमध्ये देशभरी रहेका हलहरुको सेटिङ्ग मिलाउनु पर्ने हुन्छ, फेरि हाइलेभलका हिन्दि चलचित्रहरुसँग ओभरल्यापिङ्ग हुने समस्याहरु नै हुन् । नेपाली चलचित्र निमार्णको क्रम देखि रिलिजिङ्गको समय सम्म नै समस्या नै समस्यामा जेलिनु पर्दछ ।
प्रश्न ः “मिस नेपाल” सुन्दरी प्रतियोगिताको आधिकारिक आयोजक संस्था हिड्रन टे«जरले पनि तपाईलाई खुब दुःख दिएको सुनियो नी ?
उत्तर ः हिड्रन ट्रेजरले मलाई मात्र दुःख दिएको होइन की, यो सम्पुण नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई नै तौलन खोजेको हो । अन्ततः चलचित्र “मिस नेपाल”लाई रिलिज गराउन नदिने उसको हरसंभव प्रयास विफल भएको छ । यो दुष्प्रयासलाई चलचित्र निर्माता संघ र हामी कलाकारहरुको प्रयास हो । हामीले वास्तवमा एउटा ठूलै युद्ध जितेको महसुस गरेका छौं ।
प्रश्न ः नेपाली चलचित्र जगतमा आइरहने यस्ता खाले समस्याहरु आफैमा एकता हुन नसकेको कारणले नै हुन भनिन्छ नी ?
उत्तर ः त्यस्तो नभनौं । नेपालको हरेक क्षेत्रमा देखिन्दै आइरहेको समस्या यस क्षेत्रमा पनि देखा पर्नु स्वाभाविक नै हो भन्ने पनि ठान्नु पर्दछ । तर यहाँ निष्पक्ष र इमान्दार भएर लागिपर्ने सहयोगी हातहरु पनि छन् । तर दुःखको कुरा चाहिं पिंडितले अलि धेरै नै अभ्यास गर्नु पर्ने बाध्यताहरु भने यस क्षेत्रमा बिद्धमान रहेको छ ।
प्रश्न ः चलचित्र क्षेत्रहरुसँग सम्बधितहरुलाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?
उत्तर ः सर्व प्रथम त बहुप्रतिक्षित र रिलिजिङ्ग पुर्व नै चर्चामा रहन सफल रहेको चलचित्र बैशाख ५ गते अल नेपाल रिलिजिङ्गको डेट फिक्स्ड भएकोले नेपाली चलचित्रका निर्माता र निर्देशकहरुमा ओभरल्यापिङ्ग नगरिदिनु हुन बिनम्र अनुरोध गर्दछु । साथसाथै चलचित्र क्षेत्रमा देखा पर्ने विभिन्न किसिमका अतिक्रमण, आक्रमण तथा अन्य गलतक्रियाकलाप र यस क्षेत्रमा संलग्नहरुलाई अनाहकमा दुःख झन्झट दिने कुनै पनि ब्यक्ति तथा संघसंस्थाहरु प्रति एकजुट भएर प्रतिकारका निम्ति एकजुट हुन कलाकार, कलासंस्कृति प्रेमी तथा यस क्षेत्रमा संलग्न सम्पुर्णलाई हार्दिक अनुरोध समेत गर्न चाहन्छु । धन्यवाद १
अन्तत ‘अधकट्टी’ को ढिलाई भए पनि शुभ मुहुर्त